Sei Sarudza Snow foshoro - China Richina
Sei Sarudza Snow foshoro
A Snow foshoro rakagadzirirwa backcountry kushandiswa kugadzirisa akasiyana-siyana epamba, asi aval Kununurwa iri nyore kupfuura chinokosha chete. Nyaya iyi inopa chando-nefoshoro kushandiswa mazano uye mazano pamusoro sei tenga rimwe.
Anoshandisa nokuda Backcountry Snow foshoro
Chinonyanya kukosha chikonzero kutakura munhu ari nyaya aval. Kana uri vakapakata aval transceivers uye Yatanga Kuongorora asi havana nzira kuchera kubva wacho, iwe uri mumamiriro ezvinhu akaipa kwazvo.
Munhu wese ari boka, kwete chete 1 kana 2, vachipinda yechando backcountry anofanira kutakura nefoshoro. Hauzivi ndiani kubatwa ari aval, uye munoda kuita nechokwadi chokuti iripo zvose nemafoshoro ari zvisina kuvigwa.
Nefoshoro anoshandiswawo kuchera makomba kuti kusarudza backcountry snowpack ezvinhu. Kakawanda yose rwendo, nhengo dzebato vanofanira kutsvakisisa kupinda chando kuona zviri kuitika pasi petsoka. A gomba chando unokubvumira kuona kana simba akaturikidzana kuripo-izvi vaigona kusunungura uye kutanga Vaiisa. Kuti uwane pamusoro snowpack yokudzidza, ona Richina Ltd. Advice
A kushandiswa zvikuru hakuzivani echando nemafoshoro ndiko kuveza kubva pamwero nzvimbo tende rako kana chando musasa kana rechando kukwira. Unogona veza mumwe windscreen kana kuchera nzvimbo kicheni, zvakakwana aikwana, kana uri kudaro zvokunamata.
Zvichida hainyanyi kuzivikanwa ndechokuti nefoshoro anouya batsira kuti kuchera yakachena chando itye kuti mvura yokunwa. Scooping wako water bottle kana maoko ako mabasa, asi izvi nokukurumidza unowana Zvinorema uye kuchitonhora.
Chokwadi, backcountry nefoshoro kunogonawo kukubatsira Chicherai motokari yako panguva trailhead kana panguva the uyai.
Kunotenga imwe Snow foshoro
Key zvinhu apo nefoshoro kunotenga vari kuwana kodzero pakuenzanisa simba, uremu, chipande saizi / chimiro uye rokuona nyaradzo.
Backcountry nefoshoro dzinoitwa kuti ave simba uye lightweight:
6000-dzakatevedzana aruminiyamu anowanzodanwa inoshandiswa nefoshoro miseve uye mashizha. Kunyange mapurasitiki riri kupenya, aruminiyamu inopa simba uye mukurumari zvinodiwa amburenzi kushandiswa.
Mumwe yakasiyana design, ari Snow nzwara, anoshandisa mukuru arambe achirema polyethylene (HDPE) saka unogona wakapetwa uye zvakachengetwa mukati rongedza yenyu. Izvi super-chiedza womuenzaniso zvikuru kuti chando musasa pane zviri pagungano aval Chiitiko.
Chipande Size uye Rakaumbwa
Chipande hukuru siyana pakati yokutevedzera. mashizha makuru muri kukuru nokukurumidza ichifambira chando, asi ivo vanoda simba uye anogona kupedza iwe nokukurumidza. Maduku mashizha vari nyore kubata uye angabvumira kuti foshoro panguva nokukurumidza zvikuru pamusoro kwenguva refu.
Chipande zvitarisiko uyewo siyana. Flat mashizha vari yakanakisisa kusika wakatsetseka chando-gomba masvingo; munhu serrated chipande unopinza kunobatsira bust kumusoro chando.
Most backcountry nefoshoro vane telescoping kana segmented miseve kuti nyore achabatanidza kuti rongedza wako. Ikodzere pamwe mabhatani chitubu-akatakura kuti mifananidzo inokukurudzira kupinda mumakomba unobatanidza zvikamu.
Pazvibato, yemanyorero yakagadzirwa epurasitiki nokuda nyore kubata, uya ari siyana maumbirwo:
The T-bata, riri vabatwa pakati minwe, ndiye lightweight uye anoshanda zvakanaka vanhu vakawanda. Vamwe vangazviona zvakaoma kana akapfeka Mittens kana overmitts.
The D-bata rinowanzova bulkier uye zvishoma kwakanyanya. Rinopa ane vakarongeka zvakagadzirwa uye zviri nyore kushandisa Mittens.
The L-bata iri ishoma, asi rinopa lightweight pfungwa nowenyika imwe vaccuum Cleaner mubato.
Sarudzai kutaba kuti zvinonyatsoenderana tefe mumaoko enyu.